NERO KWIK MEDIA FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Intel na-emepụta ndị na-ahụ maka microprocessors kasị ewu ewu n'ụwa maka kọmputa. Kwa afọ, ha na-atọ ụtọ ndị ọrụ nke ọgbọ ọhụrụ nke CPU. Mgbe ịzụrụ PC ma ọ bụ dozie njehie, ọ ga-adị mkpa ka ị mara ọgbọ nke gị nhazi. Nke a ga-enyere aka na ụzọ ole na ole dị mfe.
Kpebisie ike na ọganihu Intel
Intel na-egosipụta CPU site n'inye ha nọmba na ihe nlereanya. Mbụ nke nọmba anọ pụtara na CPU bụ nke otu ọgbọ. Ị nwere ike ịchọpụta ihe nlereanya nke ngwaọrụ ahụ site n'enyemaka nke mmemme ndị ọzọ, ozi usoro, lee akara na ikpe ma ọ bụ igbe. Ka anyị lebakwuo anya na usoro ọ bụla.
Usoro 1: Mmemme maka ịchọpụta ngwaike kọmputa
Enwere ọtụtụ ngwanrọ inyeaka nke na-enye ozi gbasara akụkụ niile nke kọmputa ahụ. Na mmemme ndị dị otú ahụ, enwere data mgbe niile banyere ihe nhazi ahụ. Ka anyị leba anya na usoro nke ịchọpụta ọgbọ nke CPU na ihe atụ nke Wizard PC:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ, budata ma wụnye ya.
Mwepụta ma gaa na taabụ "Ígwè".
Pịa na akara ngosi ihe ngosi iji gosipụta ozi gbasara ya na nri. Ugbu a, na-ele ihe mbụ nke ihe nlereanya ahụ, ị ​​ga-amata ọgbọ ya.
Ọ bụrụ na ihe omume Wizard PC adịghị gị mma n'ihi ihe ọ bụla, mgbe ahụ, anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na ndị nnọchiteanya ndị ọzọ nke software a, nke anyị kọwara na isiokwu anyị.
Gụkwuo: Mmemme maka ịchọpụta ngwaike kọmputa
Usoro 2: Lelee ihe nhazi na igbe
Maka ngwaọrụ a zụrụ, o zuru ezu iji ṅaa ntị na igbe ahụ. Ọ nwere ozi niile dị mkpa, ma gosipụtakwa ihe nlereanya nke CPU. Dịka ọmụmaatụ, a ga-ede ya "i3-4170"nọmba pụtara "4" ma pụtara ọgbọ. Anyị na-adọtaghachi uche ọzọ na nke mbụ nke mkpụrụ anọ nke nlereanya ahụ.
Na enweghị igbe ahụ, ozi dị mkpa dị na igbe nchekwa nke processor. Ọ bụrụ na anaghị etinye ya na kọmputa ahụ, lee ya anya - a ghaghị igosi ihe nlereanya n'elu n'elu efere ahụ.
Nsogbu na-ebili naanị ma ọ bụrụ na arụrịrịrịrị nhazi ahụ na oghere na motherboard. A na-etinye griiz na-esi na ya aka, a na-etinyekwa ya na igbe nchekwa ahụ, bụ nke edere data dị mkpa. N'ezie, ị nwere ike iwepụ usoro ihe omume ahụ, kpochapụ onye nlekota oyi na ihichapu mmanụ gri, ma nke a ga-eme naanị site na ndị ọrụ maara nke ọma isiokwu a. Na CPU na laptọọpụ ọ ka na-esikwu ike karị, n'ihi na usoro nke imebi ya dị nnọọ nhịahụ karịa ịkọwa PC.
Hụkwa: Anyị na-ekpochapụ laptọọpụ n'ụlọ
Usoro 3: Ngwaọrụ Windows System
Site n'enyemaka nke sistemụ arụmọrụ Windows, ọ dị mfe ịchọta usoro ọkpụkpọ. Ọbụna onye ọrụ na-enweghị uche ga-anagide ọrụ a, a na-eme ihe niile na ntinye ole na ole:
Ugbu a na-emegide akara "Nhazi" Ị nwere ike ịlele ozi dị mkpa.
E nwere ụzọ dịtụ iche. Kama nke "Usoro" mkpa ịga "Onye njikwa ngwaọrụ".
Lee na taabụ "Nhazi" E nwere ihe niile dị mkpa.
N'isiokwu a, anyị tụlere n'ụzọ zuru ezu ụzọ atọ ị ga - esi amata ọgbọ nke nhazi gị. Onye ọ bụla n'ime ha dị mma n'ọnọdụ dịgasị iche, ọ dịghị achọ ihe ọmụma na nkà ọ bụla ọzọ, ọ bụ naanị ịmara ụkpụrụ nke akara nke CPU nke Intel.